Home News Kaluumeysto Ka Cabanaya Maraakiibta Shisheeye Ee Kusoo Xiranaya Xeebaha Soomaaliya
Kaluumeysto Ka Cabanaya Maraakiibta Shisheeye Ee Kusoo Xiranaya Xeebaha Soomaaliya
Kalluumeysatada magaalada Berbera ayaa xiligan xagaaga ee ay dabeyshu dhaceyso ka cabanayaan dhibaato ay shegeen inay doonyahooda kala kulmaan dabeysha iyo Maraakiib Shisheeye.
Kalluumeysatadan ayaa sidoo kale sheegay in marka ay badda ku yara fogaadaana shabaaktii ay ku soo jillaabanayeen kalluunka ay ka jiiraan maraakiibta waaweyn ee ajanabiga.
Qaar ka mid ah kalluumeysatada ayaa waxa ay sheegeen in xilligaan ay ka kalluumeystaan inta u dhaxeysa berbera iyo Magalada lughaye balse ay weli dareemayaan dabeylo xoogan.
Sidoo kale kalluumeysatada ayaa waxa ay sheegeen in markii ay badda ku sii fogaadaan ay la kulmaan Maraakiib Shisheeye,kuwaas oo ay sheegeen inay jarayaan shabaaktii ay ku kalluumeysan lahaayeen.
Madaxda ugu sareysa Maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ka codsadeen in ay waxka qabtaan dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiibta Shisheeye xilliga ay ku guda jiraan kalluumeysiga.
Inta badan kalluumeysatada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka cawdaan maraakiibta Shisheeye ee ku sugan Xeebaha Soomaaliya,waxaana maraakiibtaas ay sheegaan inay la dagaalamayaan Kooxaha Burcad Baddeeda Soomaalida.
Previous articleIsbedelo Aan La Shaacin Oo Lagu Sameeyay Agaasimayaasha Iyo Xoghayayaasha Wasaaradaha Xukuumada
Next articleBaashe Yuusuf Axmed Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Oo sheegay in la dhisi doono golaha adeegga Garsoorka oo aanan shaqeyn tan iyo wixii ka dambeeyay markii la kala diray sanadkii 2015.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xaqiijiyay in amniga Muqdisho aay la wareegeen...
Loolanka Cida Ku Guleysan Karta Kursiga Golaha Shacabka oo Waji Cusub...